२३ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री हुँदै — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > २३ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री हुँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. २३ अर्ब बराबरको ’ट्रेजरी बिल’ बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार बोलकबोलबाट उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । आज ३ बजे बोलकोबल भएर मंगलबार ट्रेजरी बिल जारी हुने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि रू. ८ अर्ब र १८२ दिनका लागि ६ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । यस्तै, ३६४ दिन ९ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
गैर प्रतिस्पर्धी बोलकबोलकर्ताहरुका लागि १५ प्रतिशत छुट दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकार वा राष्ट्र बैंकले आन्तरीक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने एक प्रकारको ऋणपत्रलाई ट्रेजरी बिल भनिन्छ । यो २८, ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधीको हुन्छ ।
यी बिभिन्न प्रकारका ट्रेजरी बिल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्दै आएको छ । ट्रेजरी बिल कुनै व्यक्ति वा वित्तिय संस्थाले बोलकबोल गरेर किन्न सक्छन् । उक्त बोलकबोल बहुबोल मूल्य विधि मार्फत गरिन्छ ।
२०७७ असार २९ गते ११:०१ मा प्रकाशित
ट्रेजरी बिलराष्ट्र बैंक
अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुहुँदैन, यही सरकारलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्छ: खड्का
पूर्वका तीन जिल्लामा सञ्चार सेवा अवरुद्ध, लाखौं सेवाग्राही मर्कामा